Andro maneran-tanin'ny mahantra (tapany faharoa) - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
ANDRO MANERAN-TANIN’NY MAHANTRA (tapany II sady farany)
6°) Ny fiainan’ny olombelona sy ny tenin’Andriamanitra
Tsy lefy laza ary tsy nilaozan’ny toetrandro ity fampianarana voarakitra ato amin’ny bokin’i Siràka ity. Tsy natokana ho an’ny olom-bitsy na ho an’ny kristianina irery ihany ity fahendrena manentana ny olona hifampitsimbina sy hifanampy eo amin’ny fiarahamonina ity satria izany fifampitsimbinana izany indrindra no endrika anehoana ny fahambonian’ny olombelona izay mampiavaka antsika amin’ny biby. Isika olombelona no lehibe sy tsara indrindra amin’ny zavaboary rehetra namboarin’Andriamanitra noho isika manana fo mangoraka sy mahay mifamela ary mifanampy. Tsy mba manana izay ny biby ka izany no mahatonga azy ireny samy maka ho azy sy mifamono ary mifandripaka eo amin’ny fiainany: “mifanipaka toy ny valala an-karona”.
Ny fangorahana na ny fanampiana ny mahantra ambara eto dia tsy ny fanomezana ny ambim-bava na izay tsy ilaina intsony fa fanomezana izay tsara indrindra ho azy ireo. Tsarovy ny nataon’ilay vehivavy mpitondra tena tao Sareptà (1 Mp 17,1-16) sy ilay vehivavy mpitondra tena nanome izay nanome betsaka indrindra tamin’ny fandatsahan-drakitra (Mk 12,41-44). Tsy ny fanomezana 100 Ar na 200 Ar ny mahantra mpangataka na koa ireo karazana filan-dera tahaka ny ataon’ny mpanao politika sasany izay miantso mpanao gazety isaky manao asa fiantrana no tena zava-dehibe, fa ny fikatsahana ny hahasoa ny mahantra ka manao izay hialany amin’ny fahantrana tanteraka. “Mpihatsaravelatsihy” no teny entin’i Jesoa ilazana ireo olona mitady dera sy laza amin’ny asa soa ataony ka nampianarany an’ireo mpanara-dia azy mba tsy hitady dera sy laza amin’ny soa atao.
Tsy mora ny manolo-tanana ny mahantra satria izany matetika no mahatonga ny mahantra hiankin-doha lalandava sy hiandry fanampiana avy amin’ny hafa, mahatonga azy ireo tsy hiezaka hiala amin’izany; ka ilàna fandinihana lalina amin’izay fomba rehetra handresena sy hialana amin’ny fahantrana. Koa tsaratsara kokoa raha maka fotoana hiadiana hevitra miaraka amin’izy ireny mba hahafantarana marina izay tiany hatao eo amin’ny fiainana. Koa mba maka fotoana àry ve isika hiresahana amin’izy ireny hiadiana hevitra aminy hiarahana mijery ny vahaolana maharitra miaraka aminy ? Ny tanjona dia ny mba hananany fiainana mendrika ny maha-olombelona ka hahatsapany ny hatsaran’Andriamanitra eo amin’ny fiainany. Ka izany indrindra no anentanan’ny Papa François antsika hanamarika ity andro ity isan-taona satria eo amintsika mandrakariva ny mahantra araka ny nambaran’i Jesoa ao amin’ny Jo 12,8. Ka isan’andro no iainantsika ity andro maneran-tanin’ny mahantra ity fa tsy isaky ny alahady faha 33 mandavan-taona irery ihany tsy akory. Sahala amin’ny andron’ny mpifankatia ankalazaina isaky ny 14 febroary ihany io daty io no marihina isan-taona, fa tsy midika akory izany fa amin’io andro io ihany vao mifankatia na maneho fitiavana ny olona.
Koa mametra-panontaniana amintsika ny Papa François manolona an’ireo mahantra hitantsika isan’andro manao hoe : inona no anjara biriky hoentintsika hanafoanana na hampihenana ny fahantrana sy ny fijaliana eo anivontsika ? Ahoana no fomba entintsika manampy azy ireo amin’ny fahantrany ara-panahy ? Adidin’ny Eglizy ny miahy hatrany ireo mahantra eo aminy satria amin’ny fomba ahoana tokoa moa no higohanao hasambarana raha toa ka feno tomany sy fijaliana eo amin’ny manodidina anao ? Marina fa tsy vitan’ny Eglizy ireny ihany ny famongorana ny fahantrana ka izany indrindra no ilàna fiaraha-mientana amin’ireo mpitondra fanjakana isan’ambaratongany ary ilàna fahavononana sy finiavana hanatanteraka izany amin’ny alalan’ny fizarana izay ny talenta ananan’ny tsirairay, na ny fiainana manontolo (vola aman-karena, fotoana, fitiavana, fahaizana amam-panao, sns…). Izany indrindra no nambaran’ny evanjely tamin’ny alahady faha 33 lasa teo (15 novambra 2020). Izay tsy mahay sobika mahay fatam-bary ary tsy misy manana ny ampy fa sambatra izay mifanampy; eny fa “ny valala iray aza ifanapahana “ hoy ireo razambentsika.
Ny tanana mitsotra mitondra fanampiana ho an’ny hafa dia fanehoana ny fahambonian’ny olombelona satria manambara ny fitiavan’Andriamanitra ao aminy izany. Tadidio fa noharian’Andriamanitra mitovy endrika aminy ny olombelona. Koa ny olona rehetra mahay mizara dia maneho ny endrik’Andriamanitra, ka entina andrefesana ny endrik’Andriamanitra ao amintsika tsirairay ny fahazaintsika mifampizara sy mifanampy. Koa loza ho an’izay manao “poketra huitre” (fomba ilazana an’ireo olona mahihitra sy tia tena) tsy mahay mitsinjo ny hafa, na ireo manao kely tsy mba mamindro. Indrisy anefa fa toa ny ratsy, herisetra amin’ny endriny rehetra, famonoana olona, halatra, ady, fifanolanana, kolikoly no voizina sy re hatraiza hatraiza amin’ny haino aman-jery sy eny amin’ny tambajotran-tserasera isan-karazany, fa toa tsy hita sy heno loatra ireo tanana mitsotra maneho ny endrik’Andriamanitra. Sa ve tena miasa mangina tokoa ary manatanteraka ny tenin’i Jesoa ao amin’i Md Matio ny olona tsara sitra-po araka ny voalaza hoe : “rahefa manao asa fiantrana ianao aoka ny tananao havia tsy hahalala izay ataon’ny havanana” (Mt 6,1-4)
7°) Manao ahoana ny fihetsiky ny olona manoloana ny mahantra?
Noharian’Andriamanitra ary nataony hiara-monina sy hiara-miaina ny olombelona rehetra tsy ankanavaka ka ny tanana mitsotra mitondra fanampiana dia famantarana ny fitiavana, sy fifandraisana akaiky ary fiombonana. Hitantsika izany tamin’ity ‘covid-19’ ity. Betsaka ireo tanan’olona maro tsara sitrapo naneho ny endrik’Andriamanitra teo amin’ny asany. Tao ireo mpitsabo, mpikaroka, mpitandro filaminana, mpandraharaha, mpitondra fivavahana, mpino avy amin’ny finoana isan-karazany, mpanabe, mpanao gazety, ireo olona tsara sitra-po nirotsaka antsitra-po nanampy sy nanao ny ainy tsy ho zavatra tamin’ny fiatrehana ity areti-mandoza ity. Ireny fihetsika ireny dia samy maneho ny endrik’Andriamanitra tamin’ireo marary, mijaly sy tsy manan-kohanina. Eo anatrehan’ny loza, na aretina toy itony indrindra no anehoantsika izany tanana vonona hitsotra, hanampy, tandindon’ny herin’ny tanan’Andriamanitra mitsotra hamonjy ny olona rehetra tsy ankanavaka, indrindra ny mijaly sy ny mahantra.
Nanova zavatra betsaka teo amin’ny fiainantsika ity ‘covid-19’ ity. Betsaka ny very asa, nitombo isa noho izany ny mahantra sy mijaly, mifanalavitra ny olona, tsy mifampijery intsony, ary mety sarotra aza ny hifankahalalana raha sendra mifanena eny andalana noho ny arotava, tsy mifamangy intsony ny olona satria izay tsy mahavangivangy no tian-kavana amin’izao, tsy mifandray tanana intsony fa toa mifanome totohondry, ka mety ho izany angamba no mahatonga ny sasany hifamely totohondry sy daka ao anatin’ny fivoriana rehefa tsy mitovy ny hevitra… Niova avokoa ny fahazarana sy ny fomba fifandraisana fanao teo aloha. Koa tamin’ireny fotoanan’ny fijanonana tany antrano sy tsy fifaneraserana ireny no nahatsapantsika bebe kokoa fa tsy afaka ny hipetra-drery ny olombelona ary tsy misy olona afaka milaza fa mahavita tena. Indrisy anefa fa hita taratra tamin’ireny fotoana ireny ary mbola mitohy hatramin’izao fa eo hatrany ireo mpanararaotra ny fahoriana sy ny loza toy izao, ka mahita hevitra hatrany hanangonan-karena sy hitadiavana ny tombontsoa manokana. Ilàna fahatongavan-tsaina izany, satria tsy handroso na oviana na oviana isika raha izany toe-tsaina lomorina feno fitiavan-tena izany no mbola manjaka, ary tsy hitsahatra hitombo ny elanelana misy eo amin’ny mahantra sy ny mpanana.
8°) Lohatenin’ny hafatra ny hoe atsory amin’ny mahantra ny tananao; andeha hojerentsika izay ambaran’ny Papa François momba izany:
Ny tanana mitsotra mitondra fanampiana ho an’ny mahantra dia midika fandraisana andraikitra mivantana sy fandraisana an-tanana ny fiainan’ireo mahantra, araka ny anentanan’i Md Paoly antsika mba hahay hifankatia sy hifanompo ary hifanampy eo amin’ny fiainana, araka ny voalaza ao amin’ny Ga 5,13-14 sy Ga 6, 2; satria izany fifanompoana sy fifankatiavana, indrindra ho an’ny mahantra no anehoantsika ny finoantsika fa afaka amin’ny fijaliana isika noho ny fahafatesana sy ny fitsanganan’i Jesoa tamin’ny maty.
Ohatra azo ampiharina avy hatrany no aroson’ny bokin’i Siràka amintsika eto “aza alavirina ireo mitomany fa miaraha ory amin’izay ory” sy ny hoe “aza misalasala mamangy ny marary”. (Si 7,34-35). Betsaka ireo endrika tomany sy aretina manodidina antsika, indrindra amin’izao iatrehantsika ny Covid-19 izao fa mba haintsika ve ny maneho izany fiaraha-miory sy fifanampiana izany fa tsy sanatria akory manararao-paty amin’ny andro fahoriana, ka mitady fifaliana amin’ny fahorian’ny sasany ? Samy nanana ny fomba entiny hanehoana ny fitiavany sy ny fiombonany amin’ireo marary sy mahantra ny tsirairay amin’ity loza sy ady atrehintsika ity ka izany fiombonam-po sy fanahy izany no tena zava-dehibe satria antsoin’Andriamanitra haneho ny fitiavany amin’ny asantsika isika tsirairay avy. Aza matahotra ny ho voaelingelina àry isika satria tsy mamela antsika hipetrapetraka ny tenin’Andriamanitra.
Koa izay tanana mitsotra hamonjy sy hanatona ny hafa izany dia mifanohitra tanteraka amin’ireo tanana mitsotra amin’ny endriny maro samihafa izay tsy mikatsaka afa-tsy ny tombontsoany sy ny hampitomboany ny hareny. Ny tanana mitsotra eto dia entina ilazana ny asa aman-draharaha ataon’ny tsirairay ka ny tanjona sy ny vokatry ny asan’ny tsirairay no entina andrefesana ny toe-po sy toe-tsain’izay manao izany. Betsaka amin’ireny tanana mitsotra ireny no tanana mambotry firenena sy mampitondra faisana ny mpiara-belona aminy ka manampy trotraka ny gejan’ny fahantrana izay efa mianjady amin’ny madinika. Mandram-pahoviana anefa no hitohizan’izany ? Oviana vao ho tonga saina sy hibebaka ireo mpanao ampihimamba ny harem-pirenena sy ireo tsy mataho-tody ka mampitondra mangidy ny mpiara-belona aminy ? Mbola ho avy anefa ny fotoana satria henon’Andriamanitra ny fitarainan’ny mahantra ary tsy sitrany ny mahita ny zanany ampahoriana.
9°) Inona no tanjon’ny fiainantsika ary inona no tokony hataontsika ?
Ampahatsiahivin’ny bokin’i Siràka 7,36 fa misy farany ny zavatra rehetra ary misy dikany ny fisian’ny zanak’olombelona ka adidin’ny tsirairay no manohe heviny ity fiainana mandalo ity. Anisan’ny mibahan-toerana eo amin’ny fiainantsika ankehitriny ny resaka ady tany hatraiza hatraiza. Tsy vitsy ireo mifampitory any amin’ny fitsarana sy miady mifamono kanefa io tany iadiana io ihany no hiafarana satria vovoka isika ka hody vovoka indray. Samy ho faty avokoa na ny manankarena na ny mahantra. Tsarovy ny fanoharana ny amin’ilay mpanankarena sy i Lazara mahantra (Lk 16, 19-31). Matetika anefa dia hadinontsika io fiafarana io rehefa revo amin’ny fahafinaretana azo amin’ity fiainana mandalo ity isika. Izany indrindra no itarihan’ny Papa François antsika eto mba hanentanana antsika eo amin’ny fiainana andavanandro ka hihevitra mandrakariva ny antom-pisiantsika sy hanomana ny fiafarantsika. Tsotra ny teniny, ny fitiavana aseho amin’ny asa sy eo amin’ny fifandraisana amin’ny hafa no mampisy dikany ny fisiantsika. Jereo ireo olomasina naneho izany fitiavana lehibe izany teo amin’ny fiainany, ka nikatsaka ny nanao soa sy nitia marina tokoa tahaka an’i Jesoa nandritra ny androm-piainany. Ny antom-pisian’ny olombelona dia ny ho tiaviana sy hitia, tahaka ny fahasambarana azon’ny zaza rehefa mahatsapa fa tian’ny ray aman-dreniny sy ny manodididna azy izy. Jereo ny ataontsika rehefa mahita zazakely, faly, mandray azy, manoroka azy sns…. marika sy fanehoam-pitiavana izany, ary mba ahoana kosa ny fihetsika asehontsika manoloana ny mahantra, moa ve mba mijery azy isika, mitsiky aminy, manatona sy mandray azy rehefa mamelatra ny tanany amintsika izy, mangataka ? Vonona ny hanolo-tanana azy ireny ve isika ka hampifandray ny tanantsika noho ny fifamatoran’ny fontsika ? Ny maso mifampijery, ny tanana mifandray, ny fo mifanakaiky tokoa no mariky ny tena fifankatiavana ka anehoantsika fa mpiray tampo isika satria samy zanaka tian’Andriamanitra.
10°) Mahazatra ny Ray masina ny mamarana ny hafatra omeny amin’i Masina Maria, amin’ny fanankinana ny ezaka rehetra atao, inona no ambarany ato amin’ity hafatra ity ?
Mahazatra ny Ray masina tokoa ny manankina ny hafatra tiany hampitaina amin’ilay reny, izay miara-dia amin’ny zanany rehetra. Ny reny amin’ny maha-reny azy dia mahalala hatrany ny fahorian’ny zanany satria toy ny nitondrany ny zanany tany ambohoka no itondrany hatrany ny zanany ao am-pony mandritra ny fiainany, ka tsy ho foana velively ilay fifandraisana lalina misy eo amin’ny reny sy ny zanaka. Renin’ny mahantra ilay renin’Andriamanitra satria nandalo fijaliana, ary niaina tao anatin’ny fahantrana ary nailiky ny fiarahamonina izy ireo rehefa nivahiny tany Betlehema ka tsy nisy nandray azy ny olona tao. Ny tranon’omby no mba sahaza an’ity zanak’Andriamanitra, ilay mpanjakan’izao tontolo izao. Voatery nandositra tany Ejipta indray noho ny herisetra sy ny fialonana teo amin’i Herôda mpanjaka. Maneho izany fa amin’ireny tsy manan-kialofana sy enjehina ary ireny mpifindra monina ireny no isehoan’ny endrik’Andriamanitra.
Hankalaza ny fetin’ny Noely isika, ahoana ny fiomanana amin’izany ? Vonona handray azy ve ny tokantrano tsirairay ? Vonona hanokatra ny varavaran’ny fontsika ho an’ny mahantra ve isika sa mbola ilay tranon’omby no anjara sahaza azy ireny ? Tsy vitsy amintsika no manamboatra tranon’omby ho fahatsiarovana izany, kanefa tranon’omby voaravaka sy voahaingo mirentireny aoka izany izay toa tsy mampahatsiahy ny fahoriana entin’ny mahantra sy ireo voailiky ny fiarahamonina. Zary haingon-trano sy natao hanehoana ny fari-pananana amin’ny ravaka sy ireo jiro maro loko. Koa anjaran’ny tsirairay no manome dikany io tranon’omby io ankehitriny ka miezaka manokatra ny fony ho an’ny mahantra isan’andro satria izany tokoa ny Noely, izany hoe tonga ao am-pontsika Andriamanitra rehefa mandray Azy amin’ny alalan’ny mahantra isika.
“Mampanan-karena fitiavana antsika ny mahantra” hoy ny Papa François ka ny fahaizantsika mifampitondra ny mavesatra sy ny fifanampiantsika amin’ny sarotra no lalana mitondra antsika amin’ny fahasambarana sy anehoantsika ny endrik’Andriamanitra izay hitantsika indrindra amin’ny mahantra sy madinika.
Rodin Noëlson RABOTOVAO